टैगोरको शान्ति निकेतनबाट अनसनरत डा केसी र ओली सरलाई हेर्दा - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
जयप्रकाश आनन्द माघ १७
अहिले मेरो सरोकार डा. गोबिन्द केसीको अनसनबारेमा हो। डा केसीको माँगलाई जनस्तरले आत्मसात गरेको छ। त्यसलाई जायज ठानेको छ। जनताको यस अवधारणालाई राज्यको ब्याख्याले अन्यत्र मोड्न सक्दैन। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यत्तिमात्र बुझिदिनु भए हुन्छ।
सुशीला कार्कीलाई माओवादीले न्यायाधीश बनाए। तर, एमालेले सधैँ सुशीलालाई बोकेर हिँडे्यो। सुशीला कार्की न्यायको आडम्बरमा काँग्रेसको छाला काढ्न चाहन्थिन्। यो कुरा एमालेलाई निकै मन प¥यो। तिनै सुशीलालाई अहिले नागरिक समाजको नेता हुनु परेको छ। उनले डा. केसीलाई समर्थन गरेकी छिन्। यो कुरा अहिले ओलीलाई मन नपर्नु स्वभाविकै हो।
लोभीपापीहरुबाट यस्ता खेल भैरहन्छन्। प्रम ओली तत्क्षणका यस्ता कुराहरूमा पर्नुहुन्न। मैले माथि भनेँ, बबी सैंड्स अनसनरत् मरे। तर उनले उठाएको मुद्दा मरेको छैन। भोलि डा. केसी पनि मर्न सक्छन्।
निःसन्देह उनको मृत्युका बारेमा प्रम ओलीले कुनै ज्यान मुद्दा बेहोर्नु पर्दैन। तर, डा. केसीले उठाएका सवालहरूमा आफ्नो कल्याण देख्ने जनताका भरोशा मर्नेछ। डा. केसीको देह मर्नेछ। तर उनमा आफ्नो कल्याणको आशय देख्नेहरूको भरोशा मर्नेछ। त्यो घडी प्रम ओलीका लागि सुखद हुने छैन।
गाउँघरका हाट बजारमा बौलाहा मजनूँहरूलाई स–साना केटाकेटी बच्चाहरूले गिज्याउँदै लखेट्ने गरेझैँ प्रम ओली आम जनताको च्याँग्रा लखे्ट्याईमा पर्नु हुनेछ। आउने चुनावमा हरेक मतदाताको छोपिएको अनुहारमा डा. केसीको मुखुण्डोको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ।
बेनजीरले भनेकी थिईन्, ‘जनताले यस्ता बेहुदा कुरालाई पत्याएर मलाई प्रश्न गर्ने गर्थे, मेहतर्मा आप तो सोनेका सोरबा पिती है?’
यतिबेला म कोलकतास्थित प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ टैगोरको शान्ति निवासमा आइपुगेको छु। यहाँबाट काठमाडौँतिर फर्केर भन्न चाहन्छु: यस्तो हुन्छ, प्रचारका अगाडि पराधिन जनता। डा. केसी मर्न सक्छन्। उनले मृत्युमै प्रारब्ध देखेको हुन सक्छ। तर, यसपछि हुने भरोशाको मृत्युले आशाहरूको लाश थप्याथप्यै गर्नेछ ओली सर!
प्रकाशित १७ माघ २०७५, बिहिबार | 2019-01-31 13:33:36